Fomba entin’ny tanora Champani ao Kambodza hampiroboroboana ny kolontsain-dry zareo tanaty valan’aretina · Global Voices teny Malagasy
Manodidina ny 30.000 eo ny Champani ao Kambodza
Voadika ny 16 Novambra 2021 3:46 GMT
Mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Champani nandritra ny fotoana fianarana iray. Loharano: Facebook
Vondron-tanora iray ao Kambodza no nahita fomba famoronana hampiroboroboana ny fiteny sy kolontsaina Champani amin'ny alalan'ny hetsika an-jotra.
Ny vondrona Champani dia avy amin'ny faritanin'i Champa fahiny (Vietnam afovoany sy atsimo ankehitriny). Misy 30.000 mahery ny Champani any Kambodza, izay fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Cham Kan Imam San. Ny ankamaroan'izy ireo amin'izao fotoana izao dia any amin'ny faritany Kambodziana ao Kampong Chhnang, Pursat ary Battambang.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, niezaka mafy tao amin'ny sehatra an-jotra toy ny Instagram sy Facebook ny vondrona mba hanairana ny saina momba ny fiteniny, ny soratra tsy manampaharoa ary ny tantarany.
Niresaka tamin'i Teyaorm Mas, mpikambana ao amin'ny Kan Imam San Youth for Development (KIYD), vondrona iray natokana hanamafisana ny asa an-tsitrapo ho an'ny fiaraha-monina mba hitazomana ny fomban-drazana Champani, ny Global Voices. Niorina tamin'ny taona 2011 ny vondrona ary manana mpikambana mavitrika eo amin'ny 30 izy ireo amin'izao fotoana izao izay manao hetsika isan-karazany amin'ny fikarakarana fiaraha-monina ao anatin'izany ny fanampiana ireo zokiolona mpikambana Champani sy ny fikarakarana kilasy amin'ny teny Cham amin'ny aterineto.
Mamokatra horonantsary fohy sy fampianarana anjotra ny KIYD izay aranty ao amin'ny media sosialy. Mizara karazany amin'izany vokariny izany i Teyaorm Mas:
Matetika ny votoatinay miresaka momba ny lanonana nentin-drazana, ireo hetsika ataon'ny KIYD ao amin'ny vondrom-piarahamonina toy ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fianarana Cham (indroa isan-kerinandro) anjotra, ny fanohanana ireo zokiolona sy ny hafa.
Nanoratra ny zava-niainany nandritra ny valan'aretina i SosTey, iray amin'ireo nandray anjara fianarana fiteny Cham anjotra Cham:
Nandritra ny valan'aretina COVID sy ny firindrinana, afa-nitaiza ny tenako ho salama ihany aho tamin'ireo fianarana anjotra ary iray amin'ireny ny Cham. Cham fiaviana aho ary iray amin'ireo fiteny ankafizina sy mahakevoka indrindra ho ahy.
Afa-manatsara sy mianatra miaraka isika. Andao handroso miaraka hamelona ny fitenintsika!
Kilasy fianarana Cham an-jotra tanterahana amin'ny alalan'ny Zoom. Loharano: Facebook
Nozarain'i Teyaorm Mas ny sasany amin'ireo fanamby atrehin-dry zareo amin'ny asany toy ny “fahatakarana voafetra amin'ny media sosialy, tsy fahampian'ny olona hanao ny hetsika sy hitondrana ny sanganasa (Champani) ho an'izao tontolo izao, ny fanintonan'ny kolontsaina vahiny, ny tsy fahampian'ny famatsiam-bola hanabeazam-boho ny fampiarana Cham eo amin'ny fiaraha-monina, ary tsy fisian'ny fandaharam-pianarana fianarana/amboaram-pianarana ho an'ny zandriny/taranaka manaraka hanombohana mianatra ny fiteny.”
Nanampy izy fa misalasala mizara fahalalana amin'ny taranaka tanora ny zokiolona sasany “satria mino izy ireo fa mety hanimba ny fizarana torohay sasany”, izay mifandray amin'ny “holatry ny ady” niainan'ireo zokiolona indray nihira.
Na dia teo aza ireo fahasarotana ireo, dia nijoro tamin'ny fisoloana vavany izy ireo ary niara-niasa tamin'ny vondrona manerantany mihitsy aza mba hanatontosany ny irak'izy ireo. Ohatra, nanasongadina ny kolontsaina Champani ry zareo rehefa nitantana ny pejy Instagram an'ny Global Voices nandritra ny herinandro tamin'ny volana Aogositra.
Nofintinin'i Teyaorm Mas ny lesona vitsivitsy avy amin'ny fanentanana anjotran-dry zareo:
Renay fa mihabetsaka ny olona te hahalala momba anay amin'ny sehatra lalindalina kokoa ary mahafinaritra azy ireo ny mijery izay vokarinay, izay antony manosika ny vondrona hanohy ny iraka ataonay. Faharoa, nahazo be tamin'ny vondrom-piarahamonina izahaynandritra ny taona maro, koa maninona raha mitsitsy adiny roa isan-kerinandro mba hamerenana izay azonay atolotra amin'ny fitehirizana ny kolontsainay sy hahatonga ny olona maro manerana izao tontolo izao hahafantatra anay. Mino izahay fa mendrika ny hanokanana fotoana kely ny vondrom-piarahamonina amin'ny alàlan'ny fanombohana avy amin'ny kely, saingy misy fiantraikany maro.
Mikasa ny hanatsara sy hanitatra ny hetsika an-tserasera sy ivelan'ny aterineto ny KIYD:
Nanolo-tena hanatsara ny kilasy fianarana Cham an-tserasera izahay mba hirotsahana bebe kokoa sy hampiala voly kokoa mba hahafahan'ny mampiditra tanora maro kokoa hisoratra anarana ao amin'ny kilasy. Zava-dehibe ambonin'izany, vao nanomboka ny tetikasa fandraketana manokana izahay izay ezahinay handraketana ny feo famakiana/fihirana an'ireo zokiolona avy amin'ireo boky tranainy anananay. Maniry ny hitahiry ireo harena ireo izahay ary tena mila fanohanana mba hanatanterahana izany.